प्रदेश-७ – Page3– Halkaro
१३ वर्षमै विवाह १८ वर्षमै दुर्इ सन्तान पछि स्थायी बन्ध्याकरण
डोटी । कानुनले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । तर, डोटीकी एक किशोरीले १८ वषमै दुई सन्तान जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण पनि गरेकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ । बोगटान गाउँपालिका- १ सिमचौरकी मनीषा बोहराले ६ फागुनमा बन्ध्याकरण गराएकी हुन् । जिल्ला अस्पतालले उनकै गाउँमा शिविर चलाएको थियो । १३ […]
प्रदेश ७ः मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकका निर्णय के-के ?
प्रकाशित मिति : २०७४, ६ फाल्गुन आईतवार
कैलाली । प्रदेश ७ को पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक अाज बसेको छ । पहिलो बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली र केही सामाजिक निकट प्रमाणीकरण सम्बन्धित नियमावली २०७४ लाई स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलता […]
प्रदेश ७ मा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन
कैलाली । प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् । एमालेबाट चार र माओवादीबाट दुई मन्त्री बनेका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह प्रदेश सरकारमा गृह […]
सातै प्रदेशले पाए मुख्यमन्त्रीः चार प्रदेशमा सरकार बन्यो, तीनमा बाँकी
प्रकाशित मिति : २०७४, ४ फाल्गुन शुक्रबार February 17, 2018
काठमाडौं । बिहीबार सम्म देशका सातै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको छ । बिहीबार प्रदेश ६ र ७ मा मुख्यमन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन् । बिहीबार नै प्रदेश १, २ र ५ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । प्रदेश ३ मा यसअघि नै सरकार विस्तार भइसकेको छ । विहीबार प्रदेश ६ बिहीबार नै माअोवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही […]
प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्रीमा भट्ट
प्रकाशित मिति : २०७४, ३ फाल्गुन बिहीबार February 15, 2018
धनगढी । माअोवादी नेता त्रिलोचन भट्ट प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । भट्टको शपथ भने यही फागुन ५गते गर्ने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पत्रकारसँग […]
विभन्न स्थानका एनसेलका टावरहरूमा अागजनी
काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका टावरमा अज्ञात समूहले अागजनी गरेको छ । डढेलधुराको आलिताल गाउँपालिका–२ काफलीमा रहेको एनसेलको टावरमा अज्ञात समूहले सोमबार राति करिव ९ बजे आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आगजनीबाट टावरमा रहेको जेनेरेटर पूर्णरुपमा नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले जानकारी दिए । टावरमा कार्मचारी नभएको […]
काठमाडौं । अाज सोमबार चार वटा प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ । प्रदेश नम्बर १, २, ६ र ७ को दोस्रो प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो । अाजै बस्ने बैठकले प्रदेश १, ६ र ७ मा सभामुखको टुंगो लगाउने छ । सभामुखका लागि प्रदेश नम्बर १ मा एमालेका प्रदीपकुमार भण्डारी, ६ मा एमालेकै राजवहादुर […]
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लाग्यो टुंगोः सातै दिनभित्र सबै प्रदेशमा सरकार
प्रकाशित मिति : २०७४, २८ माघ आईतवार February 12, 2018
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । पहिलो पटक प्रदेशले प्रदेश सरकार पाउँदै छन् । अाइतबार सबै सात प्रदेशको टुंगो लागिसकेको छ । अाइतबार नै प्रदेश ५ र प्रदेश ३ मा सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलार्इ दाबी प्रस्तुत गरेको छ । अाइतबार नै प्रदेश ४ मा एमालेले संसदीय दलको […]
वडाध्यक्षमा माअोवादीसँग हार, माअोवादीको मतले राष्ट्रियसभा सांसदमा विजयी
काठमाडौँ । वडाध्यक्षमा पराजित भएका नरपति लुहार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भएका छन् । कालिकोटका लुहार गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रास्कोट नगरपालिका ८ को वडा सदस्यमा पराजित भएका थिए । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारसँग ४ मत अन्तरले पराजित लुहारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माअोवादीकै मत पाएर विजयी भए । उनले ३ हजार ६ सय […]
राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत कहाँ कसले जिते ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २५ माघ बिहीबार February 8, 2018
काठमाडौं । बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । गठबन्धनले राष्ट्रियसभाका निर्वाचित हने ५६ सिट मध्ये ३६ सिटमा जित हासिल गरेको छ । काँग्रेसले १३ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै मधेसी दलहरू राजपा र फोरमले २/२ सिट हात पारेका छन् । प्रदेश नं १ को दुई सदस्यका लागि आज […]